သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကြက်သားဗူးသီး၊ ကြက်သားရိုစ် နှင့် ဘဲဥဆားစိမ်သုပ်
အဲဒီအချိန်မှာ ဗူးသီးကို လှီးပါ။
ကြက်သား နည်းနည်းနူးလာရင် ဗူးသီးတွေ ထည့်လိုက်ပြီး ပုံမှာပြထားတဲ့ ပန်းသီးဖျော်ရည်ကို ဗူးသီးနူးလောက်ချိန်မှာ အနည်းငယ်ထည့်ပါ။
အားလုံး နူးတဲ့အချိန်မှာတော့ ပျဉ်းတော်သိမ်ရွက်လေး နည်းနည်းဖြူးလိုက်ပါ။
ဒါဆို ကနေဒါဗာရှင်း ကြက်သားဗူးသီးရပါပြီ။
ကြက်သားရိုစ် (ပြင်ဆင်ချိန် အပါအ၀င်... မိနစ် ၂၀)
ကြက်သားကို ထုံးစံအတိုင်း အနေတော် အတုံးတုံးပါ။ မုန်လာဥနီလေးတွေကို အ၀ိုင်းလေးတွေ ညီညီဝိုင်းပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလည်း အ၀ိုင်းလေးတွေ လှီးပါ။ ပြီးတော့ အိုးထဲထည့်ပြီး ဆီအနည်းငယ်၊ သကြား၊ ဆားနည်းနည်းနဲ့ ပဲငံပြာရည်ထည့်ပြီး မီးပေါ်တင်ပါ။
ကြက်သားအနည်းငယ်နူးလာချိန်မှာ ပန်းဂေါ်ဖီလေးတွေကို ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ အုပ်ထားလိုက်ရင် ကြက်သားပန်းဂေါ်ဖီမုန်လာဥနီရိုစ် ရပါပြီ။
သူက အိမ်လည်း မနံဘူး။ ရုံးကို ထမင်းနဲ့ ထည့်သွားလို့လဲရတယ်။ ပေါင်မုန့်လေးနဲ့လည်း ထည့်သွားလို့ ရပါတယ်။
ဘဲဥဆားစိမ်သုပ်... ( ၁၅ မိနစ်)
ဒီဘဲဥဆားစိမ်ကတော့ ဗီယက်နမ်ဆိုင်မှာ ပြုတ်ပြီးသားဗူးနဲ့လာပါတယ်။ ခြောက်လုံးကို လေးဒေါ်လာခွဲလောက်ပဲ ပေးရတယ်။
ကြက်သွန်ပါးပါးလှီး၊ ခရမ်းချဉ်သီးပါပါးလှီး၊ ဆီစိမ်းရယ် နဲ့ပဲ သုတ်လိုက်တာပါ။ ဆားစိမ်ဆိုတော့ ဆားမထည့်ပါ။ အချိုမှုန့် မသုံးပါ။ သံပုရာသီးလေးနဲ့ နံနံပင်လေး အုပ်ရင် ပိုပြီး အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
မလေးရဲ့ အထက်ပါ ချက်နည်းပြုတ်နည်းက နှယ်နှယ်ယယ မဟုတ်ပါ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘလောဂ်သက်တမ်းသုံးနှစ်မှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရေးသားပြုစုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂန္တ၀င်ပါပဲနော်...။
လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်လောက် ဘလောဂ်စရေးကာစက ကနေဒါဗားရှင်း ချဉ်ရည်ဟင်းချက်နည်းကို ရေးသားပြုစုဖူးပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ အိပ်မက်က ပြန်ကူးထားပေးတာပါ။ စာလုံးပေါင်းအမှားများစွာကိုလည်း သိပ်ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေကလွဲပြီး အရင်အတိုင်း မပြုမပြင်၊ ပြန်လည်တင်ထားပေးပါတယ်.. လို့။
ငရုတ်သီးစိမ်း လေးတောင့်ခန့် 
မြန်မာပြည်နဲ့ ဝေးတဲ့ အချို့ သောအရပ်ဒေသတွေမှာ ချဉ်ပေါင်ရွက်အစစ်(သို့)
လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်မရရင် spinach အရွက်ကို ချဉ်ပေါင်ရွက်နေရာမှာ အစားထိုးပြီးသုံးကြပါတယ်..
အဲလိုအစားထိုးသုံးချက်ကြတဲ့ ချက်ပြုတ်နည်းကို အိပ်မက်မှာတင်ကြရအောင်ဆိုတဲ့
အိုင်ဒီယာကိုပေးတာကတော့ ကိုByakga ပါ..
သူကလဲမအားတာနဲ့ အချိန်ရရင် ကျွန်မပဲ ရေးလိုက်တော့ဆိုတာနဲ့
ကျွန်မရဲ့ ချဉ်ရည်ဟင်းလက်ရာကို စာဖတ်သူများနှင့်ဝေမျှပါတယ်..
သူ့နည်းက ပိုကောင်းနိုင်ပေမယ့် ကျွန်မနည်းကိုလဲ မြည်းစမ်းကြည့်ကြပါ..
ကျွန်မ ချက်ပြုတ်နည်းမမှန်ရင် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပေးကြပါ။ ချက်ပြုတ်နည်းနှင့် မတူပဲ ၀တ္ထုနှင့်တူနေပါက ဝေဖန်အကြံပြုပေးကြပါ။)
ကျမ်းမာရေးနှင့် ညီညွှတ်လိုပါက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်မျှစ်ကိုသုံးပါ။
အလျှင်လိုနေသည့်အခါတွင် (ပျင်းသည့်အခါတွင်)ပုံတွင်ဖော်ပြထားသော ပုလင်းမျှစ်ကိုသုံးပါ။
ပုလင်းထဲမှ မျှစ်များကို (ပိန်ချင်လျှင်) စကာထဲကိုစစ်ထည့်ပြီး ရေထပ်ဆေးပါ။
ပုလင်းထဲက ဆီကိုနှစ်သက်ပါကဆီသတ်ရန် အနည်းငယ်ယူသုံးနိုင်ပါသည်။
ငါးကို ဆား၊ နနွင်းသင့်ရုံ နယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် အချိန်အနည်းငယ်ထားပါ။
အိမ်မနံချင်ရင်တော့ ဆီမသတ်ပဲ ဆီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊နီ၊ မျှင်ငါးပိ၊ နနွင်းတို့လုံးချက်ချက်ပါ။
ဆီသတ်ချက်မှ အရသာရှိတယ်လို့ ထင်သူများကတော့ အလွန်လေပြင်းထန်တဲ့ ရက်ကိုစောင့်ပြီး
ပြူတင်းတံခါးတွေ အကုန်ဖွင့်ပြီး ဆီသတ်ချက်နိုင်ပါသည်။ (တိုက်ခန်းတွင်နေထိုင်သူများကတော့
ငါးဆီသတ်နံ့ ပြင်းထန်လျှင် တံခါးခေါက်ပြီး လာပြောမည့်သူများနှင့် ကြုံတွေ့ နိုင်သဖြင့်
ဘုရားစာရွတ်ပြီး ချက်ပါ။ ထိုသူများသည် လေထုညစ်ညမ်းသည်ဆိုပြီး ကားထုတ်လုပ်သော
အကြီးစားလုပ်ငန်းရှင်များကို တရားစွဲသော California Governor General – Arnold Schwarzenegger လိုလူမျိုးများဖြစ်နိုင်ကြောင်းလဲ သတိပြုပါ။
ကျောင်း၊ ရုံး၊ အလုပ်သွားခါနီး ကိုယ့်မိခင် ဒီလိုဟင်းမျိုးချက်နေလျှင်
အိပ်ခန်းထဲကပြူတင်းပေါက်မှ လှေကားထောင်ဆင်းပြီးသာ အပြင်သို့ ထွက်သွားပါ။)
ငါးအနည်းငယ်နူးလျှင် အရွက်နှင့် မျှစ်ကိုထည့်ပါ။ အရွက်များနူးလာလျှင်
မန်ကျည်းမှဲ့ရည် (သို့ ) ဗီယက်နန်ဆိုင်များတွင် ရနိုင်သော Tamarind Soup Base ကိုထည့်ပါ။
ငံပြာရည်ကြိုက်သူများ အငန်လိုသလိုထည့်နိုင်ပါသည်။ ရေဆူသော် ငရုတ်သီး စိမ်းအုပ်ပြီးချပါ။
သက်သတ်လွတ်စားလိုသူများ ငါး၊ ငပိ မထည့်ပဲ ဒီအတိုင်းချက်လျှင်လဲ အရသာအလွန်ကောင်းပါသည်။
လက်မနံချင်ရင် တခါသုံး မီးဖိုချောင်လက်အိတ်ပါးပါးလေးနှင့် ငါးကိုကိုင်ပါ။
ဆံပင်ထဲသို့ ဆီသတ်နံ့ မ၀င်ချင်ရင် မသုံးရသေးသော ရေချိုးတဲ့ shower cap ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(မတော်တဆ ဆံပင်ချည် ဟင်းထဲမကျရန်ကာကွယ်ရာလဲကျပါသည်)
အိမ့်ချမ်းမြေ့ဟင်းချက်ရင် အမြဲအဲလိုလက်အိတ်တွေ၊ ဆံပင်အစွတ်တွေနဲ့ ချက်သည်လို့တော့မထင်စေလိုပါ။
Spinach သည် အခြား ကယ်လ်စီယမ်ပါသော ဟင်းရွက်များကဲ့သို့ပင် အရိုးများကိုသန်စွမ်းစေပါသည်။ မှတ်ဥာဏ်ကိုလဲကောင်းစေသည်။ ပိုတက်စီယမ်၊ မက်ဂနီစီယမ်၊ ဗီတာမင် K များနှင့်ပြည့်စုံသည့်အပြင်
အူမကြီးကင်ဆာနှင့် လေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုလဲ ကာကွယ်နိုင်သည်ဟု သိရပါသည်။
Comment by သိင်္ဂါကျော် — October 22, 2009 @ 2:31 am |Edit This
မလေးရေ ……….. စားကောင်းသောက်ဖွယ်လေးတွေ လာငမ်းသွားတယ်နော်။ ဟင်းချက်နည်းလေးကိုလည်း ကော်ပီ ကူးသွားတယ်။ ဒီမှာတော့ စလုံးဗားရှင်းနဲ့ ချက်စားမယ်လေ။း)
Comment by ဒဏ္ဍာရီ — October 22, 2009 @ 2:35 am |Edit This
အ၀ဆွဲသွားပါသည်။ ထပ်စားဖို့လည်း ပါဆယ်ထုတ်သွားပါ၏။
Comment by ဏီလင်းညို — October 22, 2009 @ 3:56 am |Edit This
ရောက်တယ်နော် … မမအိမ့် လက်ရာလေးကို သေချာလေ့လာသွားတယ်….။
ထင်တောင်မထင်ထားဘူး ကလောင်တံကို ကျွမ်းကျက်စွာကိုင်နိုင်သလို မီးဖိုချောင်ကိစ္စလေးတွေလည်း ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လိမ့်မယ်လို့းP
မမ လက်ရာလေး အပြင်မှာပဲ လာစားတော့မယ်နော်…. ဟိ ကျွေးမှာလား မသိ ….းp
Comment by နှင်းဟေမာ — October 22, 2009 @ 3:59 am |Edit This
မလေးရေ.. ဟင်းချက်တဲ့ ပို့စ်လား..မသီတာ တခုမှ မတင်ရသေးဘူးလေ…ဟင်းမချက်တဲ့ ပို့စ်တော့ တင်ပါတယ်…
မသီတာကို မချက်တတ် မပြုတ်တတ်လို့မထင်စေလိုပါ…သဖြင့် ဟင်းချက်ခြင်းအနုပညာ ဟူသော ပို့စ်တခု အလျင်အမြန်ရေးရန် စိတ်ပိုင်းဖြတ်မိပါကြောင်း…း)
Comment by S-C — October 22, 2009 @ 4:20 am |Edit This
အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်.. =) (ဒီတစ်ခါ အတွေးမခေါင်တော့ပါဘူး)
Comment by ShwunMi — October 22, 2009 @ 6:43 am |Edit This
ဒီနေ့…. Gmail ရဲ့ custom massage မှာ… စာကောင်းကောင်းဖတ်ချင်တယ်လို့ တင်ထားမိတယ်…။
မမ တစ်ယောက်က ဒီကို သွားဆိုပြီး ညွှန်လိုက်လို့… ရောက်လာရင်းနဲ့ …. နေ့လည်လောက်ထဲက စဖတ်လိုက်တာ…..ရုံးမှာ ဘာအလုပ်မှကို မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး…အိမ်ပြန်ရောက်တော့လဲ…. ဆက်ဖက်နေတာ..ခု အိပ်ဖို့ သင့်တဲ့ အချိန်ရောက်နေလို့ အိပ်တော့မယ်… ၀တ္တု တွေတော့ ကုန်ပြီ…ကျန်တာတွေ နောက်နေ့ပေါ့…။။ ပြောချင်တာ C box လဲ မရှိတော့… ခု နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့ ဒီပိုစ့် လေးမှာပဲ ပြောသွားတော့တယ်…။ မမ စာတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်..၊ အမြဲရောက်လာဖြစ်တော့မှာပါ…။
Comment by မေဇင် — October 22, 2009 @ 8:25 am |Edit This
I am going to cook “Spinch with bamboo shoot sour soup” using your cooking method this weekend. I know I am going to eatalot at least2full plates of rice.
You can also pair it with “Burmese style kyet thar kyaw”. Yum….! Um …Um…good.
Ordinary housewife Lin
Comment by Lynda — October 22, 2009 @ 9:40 am |Edit This
Comment by minthant2009 — October 22, 2009 @ 9:58 am |Edit This
ကြက်တားနဲ့ ဘူးတီးနဲ့ စားချင်လှပြီ …
Comment by aye — October 22, 2009 @ 10:01 am |Edit This
အဟား …..ကျက်ပြီလား မကြီး … ဗိုက်ဆာနေတာနဲ့အတော်ပဲ ….စားမယ်နော် :P
Comment by စာချစ်သူ — October 22, 2009 @ 10:37 am |Edit This
နေကောင်းပြီထင်တယ်.. ဟင်းတွေချက်နေတာ..။ ခရမ်းချဉ်သီးကိုကြည့်ပြီး အစ်မဟင်းချက်ကောင်းမယ်ဆိုတာယုံတယ်.. သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်နဲ့ ရွရွလေးပြင်ထားသလိုဘဲ..။ ဗူးသီးနဲ့ကြက်သားလေးစားချင်တယ်..ထမင်းပူပူဖြူဖြူလေးနဲ့။
Comment by Evergeen Phyo — October 22, 2009 @ 10:54 am |Edit This
Comment by တောသားလေး — October 22, 2009 @ 5:08 pm |Edit This
Comment by မြူးသျှရီ — October 22, 2009 @ 5:54 pm |Edit This
ဒီလို လျှိုထားတာကောင်းလား။ မကြီးကိုတခါမှချက်မကျွေးဘူး။ အခုတော့သက်သေရှိပြီ။
မချက်တတ်ဘူးပြောရင်စိတ်ကောက်မှာ။ဒါဘဲ။ ခရစ်စမတ်ကျရင်ဖိတ်ကျွေးပါနော် နော် နော်။
ညီမလေးပျော်လို့ မကြီးဝမ်းသာတယ်။ ဖတ်ပြီးသားတွေပေမဲ့ပြန်ဖတ်နေတယ်.(အလွတ်ကျက်နေတာမဟုတ်ပါ။)ဟီးဟီး
Comment by Htate Htar(လရိပ်သာ) — October 22, 2009 @ 6:41 pm |Edit This
အားးးးးး ပါးးးးး ပါးးးး
ဖွင့်ဟပြောဆိုရန် ခွန်အားမရှိလောက်အောင် ဗိုက်ထဲတွင် ဂလွီဂလွမ်မြည်သွားပါ၏…
ဟင်းချက်နည်းရေးတာ ဒီတစ်ခါ ပထမဦးဆုံးပဲထင်တယ်. ကျွန်တော်တော့ အရင်တုန်းက ခဏခဏရေးဖူးတယ်. နောက်ပိုင်းကျတော့ ကိုယ်ချက်တဲ့ဟင်း ကိုယ်မစားချင်
ဖြစ်လာတာနဲ့ ဟင်းချက်နည်းအကြောင်းလည်း မရေးဖြစ်တော့ပါဘူးဗျာ…
နောက်ကျမှ အမေရိကန်ဘဲဥကြော်နည်း အကြောင်း ရေးပြဦးမယ်. ဟတ်ဟတ်ဟတ်.
Comment by Yan — October 22, 2009 @ 10:21 pm |Edit This
သိင်္ဂါကျော် … ဒဏ္ဍာရီ .. ရွှန်းမီ.. မင်းသန့်… အေး… စာချစ်သူ.. မြူးသျှရီ…
မလေးရဲ့ ဟင်းများကို လာရောက်အားပေးသောကြောင့်.. ၀မ်းသာကျေးဇူးတင်၏။
ဏီလင်းညို .. လင့်ခ်နိုင်ပါသည်ရှင်.. ပြောစရာမလိုပါရှင်..
နှင်းဟေမာ… နှင်းရဲ့ ကော့မန့်ဖတ်ပြီး ပါးစပ်ပိတ်လို့ မရဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ပျော်လို့..
S-C …. ဟင်းချက်ခြင်းအနုပညာတဲ့လား မသီတာရယ်.. ဖတ်ချင်တယ်။
မေဇင်… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မေဇင်၊ ညွှန်းပေးသော မမ ဆိုသူကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လင်ဒါ… မလေးတောင် စားချင်သွားတယ်။ ကြက်သားကြော်နဲ့ချဉ်ဟင်းလေးနဲ့
အမြဲစိမ်းဖြိုး …. စင်္ကာပူကို ကြက်သားဗူးသီး ပါဆယ်ပို့လိုက်ပါပြီ။
လရိပ်သာ.. တစ်ကယ်က ချက်ကျွေးရမှာစိုးလို့ မချက်တတ်ချင်ဟန်ဆောင်နေတာပေါ့.. သိဘူးလား..။ မကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ့်စာအုပ်ကိုယ် ကိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ အထိန်းအမှတ်နဲ့တော့ ကြွေးမှာပေါ့။ ;)
ရန်အောင်… ကိုရန်.. အမေရိကန်တွေက ဘဲဥကို ရေနဲ့ကြော်တယ် ကြားဖူးတယ်နော်..
Comment by မလေး — October 22, 2009 @ 11:32 pm |Edit This
ကြက်သားဗူးသီးချက်နေကျပေမယ့် အိမ့်လို ပန်းသီးဖျော်ရည်လေးနဲ့တခါမှ မချက်ဖူးဘူး… ကောင်းမယ့်ပုံလေး… အိမ့်လက်ရာလေးတွေကြည့်ရတာ ဟင်းချက်လက်ဆိပ်ရှိမယ့်သူပဲ… လက်ဆိပ်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘာချက်ချက်ကောင်းတာကို ပြောတာလေ… ဒီမှာတော့ဆားဘဲဥက ဒီအတိုင်းဝယ်လို့ ရတယ်… အမက ဆေးဘဲဥသာ သုတ်စားနေကျ… ဆားဘဲဥကို ဆန်ပြုတ်နဲ့ သောက်ဖြစ်တာ များတယ်… အိမ့်သုတ်သလိုသုတ်စားကြည့်ဦးမှ
Comment by တန်ခူး — October 23, 2009 @ 3:34 am |Edit This
စားချင်တယ်..စားချင်တယ်.. မမ…. ပို့ လိုက်ပါဗျိူ့ ..
Comment by ရည်မွန်ထိပ်ထား — October 23, 2009 @ 3:55 am |Edit This
ပန်းသီးဖျော်ရည်လေးက ၀ိုင်လိုသဘောမျိူးလား။ သကြားခပ်မဲ့အစား အဲလိုပန်းသီးဖျော်ရည်လေးခပ်တာ ပိုကောင်းမယ်နော်။ နည်းမှတ်သွားပါတယ်။
Comment by Anonymous — October 23, 2009 @ 4:46 pm |Edit This
တန်ခူး... မ ပြောတာနဲ့ အားတောင်တက်လို့ ဒီနေ့ မုန်လာဥ ချဉ်ရည်တစ်အိုးကြီး ချက်ပစ်လိုက်တယ်
ရည်မွန်ထိပ်ထား .. ပို့လိုက်ပြီ.. ပို့လိုက်ပါပြီး))
Anonymous .. ဟုတ်တယ်..သူက အချဉ်နဲ့အဆိမ့်ဓာတ်လေးပေးလို့ သုံးတာပါ။
Comment by မလေး — October 23, 2009 @ 11:58 pm |Edit This
ပန်းသီးဖျော်ရည် ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြက်သားဗူးသီး စားချင်တယ်၊ ဗိုက်ဆာနေတုန်း ဖတ်လိုက်တာ :P မရှက်တန်းပြောရမယ်ဆိုရင် သွားရည်တောင်ကျသလားသိဘူး
(ကြိုက်မရှက် ငတ်မရှက် ငိုက်မရှက်ဆိုတာတော့ စကားပုံရှိပါတယ်)
Comment by ဒေါင်းသေချောင်းမှာ ပျော်သည့် ကျား — October 24, 2009 @ 6:58 am |Edit This
မမချက်ထားတာစားချင်စရာ.. ဗူးသီးကြက်သားရော၊ ကြက်သားလုံးရော… အကုန်ကိုကြိုက်တယ်..
အဲဒီပန်းသီးဖျော်ရည် တွေ့တယ်.. ဟင်းထဲတော့မချက်စားဖူးဘူး..
Comment by ကူးကူး — October 24, 2009 @ 10:17 am |Edit This
အားပါး.. စားစရာတွေကတော့ မိုက်သဗျို့….. ရှယ်ပဲ
Comment by လင်းဦး(စိတ်ပညာ) — October 26, 2009 @ 11:19 pm |Edit This
my first time ever visit. impressive blog!
Comment by steve — October 27, 2009 @ 2:53 pm |Edit This
ပန်းသီးငါးပိချက်စားချင်တယ်။ အိမ်နောက်ဖေးမှာ ချိတ်ထားတဲ့ dream catcher လေးကိုလည်းလိုချင်တယ်.. =)
Comment by ဘာညာ — November 16, 2009 @ 10:12 pm |Edit This
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:16 AM